ब्युटी पेजेन्टमा सहभागी युवतीमाथि सञ्चालकले नै बलात्कार गरेको आरोप
काठमाडौंमा ५८ हजार मतगणना, कसको कति?
भरतपुरमा ३९ हजार मतगणना, कसको कति?
तिलोत्तमाको मेयरमा गठबन्धनको अग्रता
नेपालगञ्जमा गठबन्धनका उम्मेदवार फराकिलो मतान्तर सहित अगाडि
कांग्रेस सुदूरपश्चिमको सभापतिमा बलायर निर्वाचित
नेपाली कांग्रेस उन्‍नती चौधरी
नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमको सभापतिमा वीरबहादुर बलायर निर्वाचित भएका छन्।
कांग्रेस कर्णालीको सभापतिमा देउवा पक्षका शाही विजयी
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभापतिमा ललितजंग शाही सहित प्यानल नै विजयी भएको छ।
प्रदेश सभापतिमा कांग्रेसले बनाएन महिलालाई उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसको प्रदेश नेतृत्वमा महिला नआउने देखिएको छ। शुक्रबार साँझसम्म उम्मेदवारी दर्ता भएका र सम्भावित प्रदेश सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा रहेका सबै पुरुष छन्।
गुरुराज घिमिरे र उद्धव थापाले दिए प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को सभापतिका लागि गुरुराज घिमिरे र उद्धव थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
कांग्रेसको प्रदेश २ मा निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश २ को निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ।
प्रदेश २ सभापतिमा चार आकांक्षी नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ को सभापतिमा केन्द्रीय उपसभापति विमलेन्द्र निधि पक्षका चार नेताले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रदेश १ को सभापतिमा गुरुराज घिमिरे र उद्धव थापा भिड्ने प्रदेश १ को सभापतिका लागि नेपाली कांग्रेसका दुवै पक्षले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएका छन्।
सुदूरपश्चिममा देउवा पक्षकै पाँच उम्मेदवार नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिका लागि पूर्व राजदूत र पूर्व राज्यमन्त्री सहित पाँच जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
बागमतीमा भीमसेनदास प्रधान र जगदीशनरसिंह केसी भिड्दै नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश सभापतिमा भीमसेनदास प्रधान र जगदीशनरसिंह केसीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
प्रदेश १ को कांग्रेस सभापतिमा पाँच जनाको दाबी नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को सभापतिका लागि पाँच जना आकाङ्क्षी देखिएका छन्।
लुम्बिनीको कांग्रेस सभापतिमा भरतकुमार शाह र अमरसिंह पुनको प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा भरतकुमार शाह र अमरसिंह पुन प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
कांग्रेस कर्णालीको सभापतिमा ललितजंग शाही र भूपेन्द्रजंग शाही भिड्दै
नेपाली कांग्रेस लक्ष्मी भण्डारी
नेपाली कांग्रेस कर्णालीको प्रदेश सभापतिमा ललितजंग शाही र भूपेन्द्रजंग शाही भिड्न लागेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज सातै प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन शुरू हुन लागेको छ। प्रदेशमा पनि कांग्रेसका दुई समूह भिड्न लागेका छन्।
कांग्रेसको निर्वाचन समितिबाट यादवले दिए राजीनामा
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले राजीनामा दिएका छन्।
कांग्रेसको बागमती प्रदेश सभापतिमा भीमसेनदास प्रधानको दाबी नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश सभापतिमा भीमसेनदास प्रधानले उम्मेदवारी दिने भएका छन्।
कांग्रेस खोटाङको मतगणना १५ घण्टापछि पुन: शुरू नेपाली कांग्रेस, खोटाङको स्थगित मतगणना करीब १५ घण्टापछि पुन: शुरू भएको छ।
प्युठानमा कांग्रेसको मतगणना स्थलमा ढुङ्गा प्रहार, चार जना घाइते नेपाली कांग्रेस प्युठानको जिल्ला कार्यसमिति चयनका लागि भएकाे निर्वाचनको मतगणनास्थलमा ढुङ्गा प्रहार हुँदा चार जना घाइते भएका छन्।
कांग्रेसका ४८ जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको नामावली वेबसाइटमा नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनका लागि ४८ जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको नामावली वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ।
कांग्रेस महाधिवेशन ९ देखि १३ मंसिरमा नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन फेरि सरेको छ। अब ९ देखि १३ मंसिरमा काठमाडौंमै हुने भएको छ।
कांग्रेसमा पुरानाभन्दा नयाँ क्रियाशील सदस्य बढी, कुन प्रदेशमा कति? नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। जस अनुसार, पुरानाभन्दा नयाँ क्रियाशील सदस्य बढी छन्।
कोइराला परिवारका तीन सदस्यको ‘लन्च मिटिङ’, सभापतिमा साझा उम्मेदवार बनाउने प्रयास नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर कोइराला परिवारका तीन सदस्यबीच भेटघाट भएको छ। उनीहरूले सभापतिमा साझा उम्मेदवार बनाउने प्रयास स्वरूप भेटघाट गरेका हुन्।